Ukudala iziKlomelo zeLizwi
Indlela yokuCwangcisa nokudala iziKlomelo ze-WordPerfect
Izilwanyana zibalulekile xa udala amaxwebhu anezinto ezifanayo.
Ubuchule bokudala izifanekiso kwi-WordPerfect ngenye yezinto eziphambili zeenkqubo. Izilwanyana zilondoloza ixesha lokufomathiza nokufaka umbhalo, njengedilesi yakho, eya kuhlala ihleli kumaxwebhu afanayo.
Ukongezelela, unokwenza izixhobo kunye nezikhetho zeetemplates ezenza umsebenzi wakho ube lula. Oku kuthetha ukuba ungasebenzisa ixesha elingakumbi kumxholo wengxelo uze ushiye konke ukufikelela kwisifanekiso.
Ithemplate yifayile yefayile, xa ivuliwe, yakha ikopi yaloo nto ibandakanya yonke ifomathi kunye nesicatshulwa sethemplate kodwa ingalungiswa kwaye igcinwe njengefayile yexwebhu olungagqibekanga ngaphandle kokutshintsha ifayile yesifanekiso yepayilile.
Ithemplate ye-WordPerfect ingaqukatha ukufometha, izitayela, itekisi ye-boilerplate, iintloko, iinyawo, kunye ne-macros, ngaphezu kwezinye izicwangciso ezilungiselelwe. Kukho iziboniso ezenziwe ngaphambili, kwaye unokwenza izifanekiso zakho.
Ukucwangcisa I-Template Yakho yePointPact
Ngaphambi kokuba udale itemplate yakho ye-WordPerfect, yinto efanelekileyo ukucacisa oko ufuna ukukufaka kuyo. Unako ukubuyela rhoqo uphinde uhlele ithemplate yakho okanye wenze utshintsho kwizinto ezikuxwebhu ezidalwe kwi-template, kodwa ixesha elincinane ochitha imali liyakukugcina ixesha elide.
Nazi ezinye izicwangciso malunga nokuba zibandakanya:
Ukuba udala i-template ye-WordPerfect ukuyisebenzisa njengetekisi, faka inkundla yosuku eya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo rhoqo xa ithemplate ivuliwe.
Kwakhona kunye neempendulo zetekisi, faka idilesi yakho kunye nolwazi lokudibanisa ngoko kufuneka ungenayo kunye nekopi nganye.
Kwiintloko kunye neenyawo, sebenzisa amasayithi ngolwazi olunokutshintshwa kodwa luya kuhlala luqulethe uhlobo olufanayo lweenkcukacha (oko kukuthi, amanani ephepha, isihloko sephepha, indlela yefayile, njl.).
Naliphi na umbhalo oya kufakwa kuwo wonke amaxwebhu asekelwe kwithemplate.
Iikholam, kwiimida, iimathebhu, iimpendulo, amanqaku angaphantsi, njl.
Macros. Ukuba ufuna ukusebenzisa ii-macros ezithile kunye nexwebhu, zibandakanye ngethemplate.
Ukuba umqulu wakho uqulethe iziqendu ngefomathi ehlukileyo, ungasebenzisa itekisi echazayo yendawo yokuhlala, njengeTITLE okanye HEADING, ongayifakisha kuyo ikopi eyadalwa kwi template. Ngale ndlela kuya kuba nefomathi ethile kwilo candelo.
Emva kokuba unomxholo wento ofuna ukuyifaka kwi template ye WordPerfect, ulungele isinyathelo esilandelayo.
Ukudala i-Template Yakho ye-WordPerfect
Xa usukhankanyile itemplate yakho, lixesha lokubeka isicwangciso sakho kwisenzo kwaye wenze i template.
Qalisa umsebenzi kwi template yakho ye-WordPerfect ngokuvula ifayile ye template engenanto:
Ukusuka kwimenyu yefayile , khetha Okutsha kwiProjekthi .
Kwi- Yenza entsha ithebhu yebhokisi yencoko yePerfectExpert, cofa iqhosha lokukhetha.
Kuludwe lwe pop-up, khetha i- Template WP .
Uxwebhu olutsha luya kuvulwa. Kuyabonakala kwaye isebenza ngokufanayo naluphi na olunye uxwebhu lwe-WordPerfect, ngaphandle kokuba iItlathi ibar yomxhobo iya kufumaneka, kwaye xa uyilondoloza, liya kuba neefayile ezahlukeneyo.
Emva kokuba uhlele ifayile, ufaka zonke izicwangciso kwisicwangciso sakho, gcina uxwebhu ngokusebenzisa ukhiye we-shortcut Ctrl + S. Ibhokisi yencoko yababini yokugcina iya kuvula:
Kwibhokisi phantsi kweleta "Inkcazelo", faka inkcazo yethemplate engakunceda okanye abanye bazi injongo yalo.
Faka igama lethemplate yakho kwibhokisi ebhalwe igama elithi "I-Template name."
Ngaphantsi kwele "klasi yeeklasi" ileta, khetha udidi oluvela kuhlu. Kubalulekile ukukhetha icandelo elifanelekileyo lomqulu wakho kuba liya kukunceda ubuyele kuyo ngokukhawuleza ngexesha elizayo.
Xa wenze ukhetho lwakho, nqakraza OK .
Ndiyakuvuyisela, uye wadala ngempumelelo itemplate ongayisebenzisa ngokuphindaphindiweyo!
Ukusebenzisa i-Add-ins ye-Free kwi-Rename Bookmarks kwi-Microsoft Word
Ukucindezela imifanekiso kwi-Microsoft Office
Iimpawu zeSuku zeMicrosoft yaseSt. Patrick's and Templates
Shintsha umbala weMifanekiso ngaphandle kokushiya iinkqubo ze-Microsoft Office
Isikhokelo kwiiTutorials zeLizwi
Yintoni enokuyenza Xa iiFayile zeLizwi leMicrosoft aziyi kuvulwa
Iintlobo zeeNkqubo ezifumaneka kwi-Office Outwork Suites
Indlela yokudala nokusebenzisa izifanekiso zegama
Indlela Yokulungisa Ukubeka Ukubonisa Imibala kwiWindows Vista
Yintoni ephezulu yeDynamic Range (HDR) TV?
Indlela yokubeka i-SVG Graphics kwiWebhsayithi yakho
Indlela yokulungisa i-D3dx9_43.dll Ayifumananga okanye Ayiphutheli Iimpazamo
Iprofayili yeSiphequluli sewebhu se-MX5 kaMaxthon
Yiyiphi i-Brake Assist?
Yintoni ikhonkco yeKhalenda yeKhalenda yeKhalenda yeCentral Google
IiNkonzo eziPhambili zokusasaza kweeMidlalo kunye neeRadio zeRadio
I-iPhone 4 I-Antenna Problems echazwe - kwaye i-Fixed
Indlela yokuguqula iVidiyo yezixhobo eziphathekayo
Ungayithengisa i-Motorola Xooms kwiC Cable ye-USB?
Indlela yokusebenzisa i-Free ClamAV Linux I-Antivirus Software Package
Ngaba ii-Injini zophando ziyazi yonke into?
6 Iimpazamo ezininzi eziqhelekileyo zeDLL kunye nendlela yokuzilungisa
Funda ukucoca i-MacOS Mail-Complete Complete List
Indlela yokudibanisa kwiCandelo elithile kwiVidiyo ze-YouTube
I-Yamaha Yenza iRX-V "I-79" Iingqungquthela zeeTheatre zaseKhaya zeReceivers
Indlela i-Microsoft Docs.com eyahlukileyo ngayo kune-Office Online
Nceda! I-Akhawunti yam ye-Facebook iye yachithwa!
Iingxaki zokuxhunywa kweNkcazo kwiinkcukacha
Isingeniso kwiZakhiwo zePortfolio kwiCG & VFX